Beach पक्षहरूले समुद्री तट कम्बल खरीद गर्दा विचार गर्नुपर्ने - साम्प्रदायिक समाचार: अनलाइन व्यापार, थोक र B4B बजार समाचार
8 सक्छ, 20216सक्छ, 2021 सिल्भिया जेम्स ब्लग, विशेष समाचार, जीवन शैली
समुद्री तट कम्बलमा दुईवटा चीजहरू हेर्नु पर्छ - वाटरप्रूफ प्याकिंग र त्यसले बालुवालाई भगाउँछ वा गर्दैन।
यदि तपाईं आफ्नो परिवारको लागि समुद्री किनार कम्बल किन्नको लागि खोज्दै हुनुहुन्छ भने, यो पर्याप्त ठूलो हुनै पर्छ ताकि सबै यसमा आरामसँग बस्न सक्दछन्।
राम्रो गुणस्तर र समुद्री किनार कम्बल छ, यो भारी हुनेछ।
समुद्र तट बिदाको लागि मानक पिकनिक कम्बल सही विकल्प होइन किनभने यो चिल्लो क्षेत्रको लागि डिजाइन गरिएको हो। सही समुद्री तट कम्बलहरू ती हुन् जुन समुद्री तटको लागि विशेष रूपमा डिजाइन गरिएको हो र बालुवालाई भगाउने फेब्रिकबाट बनेको छ। यदि तपाईं एक बालुवा प्रुफ समुद्र तट कम्बल खरीद गर्न चाहानुहुन्छ, यहाँ केहि कारकहरू छन् जुन तपाईंले विचार गर्नु पर्दछ:
आकार बाहेक, तपाईंले समुद्र तट कम्बलको आकारलाई पनि विचार गर्नुपर्नेछ।
समुद्री तट कम्बल खरीद गर्दा, तपाईंलाई विचार गर्नको लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कारकहरू मध्ये एक हो तिनीहरूलाई निर्माण गर्न प्रयोग गरिएको कपडा। तपाईं बजारमा भेट्टाउने प्राय जसो समुद्री तट कम्बलहरू पानी प्रतिरोधी पॉलिएस्टरको प्रयोगबाट बनेका छन्, microfiber, र ऊन। समुद्री तट कम्बलमा दुईवटा चीजहरू हेर्नु पर्छ - वाटरप्रूफ प्याकिंग र त्यसले बालुवालाई भगाउँछ वा गर्दैन।
२ आकार र आकार
के तपाईं केवल एक मात्र खरीद गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईंको जीवनसाथीको लागि, वा ठूलो सम्पूर्ण सम्पूर्ण परिवारको लागि? उत्तरमा निर्भर गर्दै, तपाई एक ओभरसाईज समुद्री तट कम्बल किन्नुहोस् जुन तपाईको सम्पूर्ण परिवारमा मिल्छ वा सानो दुई किन्न को लागी एक वा दुई व्यक्तिको लागि उपयुक्त छ। यदि तपाईं आफ्नो परिवारको लागि समुद्री किनार कम्बल किन्नको लागि खोज्दै हुनुहुन्छ भने, यो पर्याप्त ठूलो हुनै पर्छ ताकि सबै यसमा आरामसँग बस्न सक्दछन्। यो तपाइँको व्यक्तिगत आइटम को भंडार को लागी केहि खाली स्थान रहनु पर्छ।
आकार बाहेक, तपाईंले समुद्र तट कम्बलको आकारलाई पनि विचार गर्नुपर्नेछ। तिनीहरू प्राय: वर्ग, आयत, वा वृत्तको आकारमा उपलब्ध हुन्छन्। बहु व्यक्तिहरूका लागि उत्तम विकल्प भनेको स्क्वायर वा आयत बिच कम्बल हो। एक गोल कम्बल एक व्यक्तिको लागि सबै भन्दा राम्रो काम गर्दछ।
राम्रो गुणस्तर र समुद्री किनार कम्बल छ, यो भारी हुनेछ। यो प्राय जसो केसहरूमा मुद्दा हुनेछैन, तर यदि सबै समुद्री किनारका उपकरणहरू बोक्दा तपाईंले समुद्री किनारमा लामो पैदल यात्रा गर्नुपर्‍यो भने, तपाईंलाई भारी समुद्री तट कम्बल मनपर्दैन। त्यस्ता अवस्थाहरूमा, हल्का कम्बलले राम्रोसँग काम गर्दछ, विशेष गरी यदि तपाईं धेरै यात्रा गर्नुहुन्छ भने।
जब यो समुद्री तट कम्बल किन्नको लागि आउँदछ, उत्तम छनौट भनेको त्यो हो जुनसँग धेरै सुविधाहरू छन् जुन तिनीहरूलाई प्रयोग गरेर र भण्डारण गर्न सजिलो बनाउँदछ।
Other. अन्य सुविधाहरू
जब यो समुद्री तट कम्बल किन्नको लागि आउँदछ, उत्तम छनौट भनेको त्यो हो जुनसँग धेरै सुविधाहरू छन् जुन तिनीहरूलाई प्रयोग गरेर र भण्डारण गर्न सजिलो बनाउँदछ। यहाँ केहि सुविधाहरू छन् जुन तपाईले विचार गर्न चाहानुहुन्छ:
बिल्ट-इन पाउच / कम्प्रेसन पट्टि: यदि तपाइँको समुद्री तट कम्बलमा कम्प्रेसन पट्टि छ भने, तपाईलाई सजिलो होस् र यसलाई बाकसमा भण्डार गर्न सजिलो हुनेछ। झोलामा पनि जोडिन सकिने कम्बलले ढुवानी र भण्डारण सजिलो पार्दछ।
जेबहरू: केही समुद्री तट कम्बलहरू जेबको साथ आउँदछन् ताकि तपाईं आफ्नो बहुमूल्य चीजहरू तिनीहरूकामा राख्न सक्नुहुनेछ।
एch्करहरू: केही समुद्र तट कम्बलहरूमा, लंगरहरू एकै ठाउँमा रहन्छन् भनेर सुनिश्चित गर्न प्रदान गरिन्छ। एक कम्बल फेला पार्नुहोस् जुन कुनामा भारित छ, वा तपाईं बालुवा-भारित समुद्र तट कम्बल खरीद गर्न सक्नुहुनेछ।
समुद्री किनारको तौंली जस्तो नभई, बाहिरी समुद्री तट कम्बलको काम तपाईंलाई सुख्खा बनाउनु होइन तर तपाईंलाई आरामसँग बस्न र बालुवाको छेउमा बस्नको लागि ठाउँ उपलब्ध गराउनु हो ताकि तपाईं समुद्र तटमा तपाईंको समयको आनन्द लिन सक्नुहुनेछ। तपाई सायद समुद्री किनारको तौंलीमा बस्न सक्नुहुन्छ जस्तो लाग्न सक्छ, तर तपाईको तौलिया भिजाएपछि तपाईं के गर्नुहुनेछ? तपाईं बस्ने ठाउँ छैन। त्यसोभए, समुद्री किनारको तौंली र समुद्री किनार कम्बल हुनु तपाईं र तपाईंको लुगामा भएको सबै बालुवाको चिन्ता नगरिकन राम्रो समय लिनको लागि आवश्यक छ।
समुद्री तट कम्बलहरू व्यापार सांप्रदायिक समाचार जीवनशैली